လယ်သမားက ခွေးများကို လှောင်ထားပေးရန် အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း မုဆိုးမှာ ခွေးများကို သေချာ ထိန်းသိမ်းထားခြင်း မရှိပေ။သည်းမခံနိူင်သည့်အဆုံး လယ်သမားကြီးသည် ရွာသူကြီးထံ ခွေးများကို အရေးယူပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ရွာသူကြီးက ”တကယ်လို့ အရေးယူပေးလိုက်ရင် ခင်ဗျားမှာ မိတ်ဆွေကောင်း အိမ်နီးချင်းကောင်းတစ်ယောက် လျော့သွားနိူင်ပြီး ရန်သူတစ်ယောက် တိုးလာနိူင်တယ်“။
"ရန်သူတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်နီးချင်းဖြစ်ချင်သလား . မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ အ်ိမ်နီးချင်း ဖြစ်ချင်သလား”။
သူက ” မိတ်ဆွေနဲ့ပဲ အိမ်နီးချင်းဖြစ်ချင်ပါတယ် “ လို့ ဖြေလိုက်တယ်။
READ - ကိုယ့်ကို အခြားသူတစ်ယောက်က တန်ဖိုးထားအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ
”ဒီလိုဆို ကျွန်တော်ရဲ့အကြံဥာဏ်ကို လိုက်နာရမယ်။ အသင်ရဲ့ဘဲတွေ မဆုံးရှုံးစေသလို မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက် တိုးလာလိမ့်မယ်။"
သို့နှင့် လယ်သမားကြီးမှာ သူကြီးပြောတဲ့အတိုင်း အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း အလှဆုံး ဘဲသုံးကောင်ကို ရွေးပြီး မုဆိုးအား လက်ဆောင်ပေးလိုက်လေသည်။
ထိုအခါ မုဆိုးလည်း ရရှိထားသော ဘဲများကို ခွေးကိုက်မည် စိုးသောကြောင့် ခွေးများကို လှောင်ထားလေတော့သည်။
လယ်သမားအားလည်း ကျေးဇူးတင်ပြီး မိမိ အမဲလိုက်ရာမှ ရလာသော အသားများကိုလဲ ဝေငှတတ်လာသည်။ လယ်သမားလဲ ခြံထွက်သီးနှံများ ဘဲဥများ လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးကမ်းခဲ့သည်။
တဖြေးဖြေးနှင့် ချစ်ခင်မှုများ ဖလှယ်ကြရင်း နှစ်ဖက်စလုံးမှာ အိမ်နီးချင်း မိတ်ဆွေကောင်းများ ဖြစ်လာကြသည်။
မိတ်ဆွေကောင်း သူငယ်ချင်းကောင်း ဆိုသည်မှာ....
၁။ လူအများ မပေးနိူင်သည့် အရာဝတ္ထုကို ပေးနိူင်ရခြင်း
၂။ လူအများ မပြုလုပ်နိူင်သည့် အရာကို ပြုပေးနိူင်ခြင်း
၃။ လူအများ သည်းမခံ နိူင်သည့်အရာကို သည်းခံပေးနိူင်ခြင်း ဆိုတာပါပဲ။
ကိုယ်လိုချင်တာကိုပဲ ဦးစားမပေးသင့်ပါဘူး။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ထားပြီး သူ့အတွက်လဲ ထည့်စဉ်းစားပေးပါ။
ရန်သူတစ်ယောက်လို့ ထင်ခံရရင် ပထမဆုံး အကျိုးဆက်က အမုန်းခံရခြင်းပဲ။ လောကလူသား အားလုံးဟာ အမုန်းခံ ဘ၀ကို ရောက်ချင်တဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိကြသလို လူတွေရဲ့ အချစ်ခံရတဲ့ ဘ၀ကို မရောက်ချင်ကြတဲ့ သူ ဆိုတာလည်း တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်မှာ ရန်သူတစ်ယောက် ရှိနေရင်တောင် များတယ်လို့ဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေဦးရေ (၅၀) ရှိနေရင်တောင် နည်းတယ်ဟုပင် ဆိုရမှာပါ။
ထိုကြောင့် ရန်သူဆို တစ်ယောက်မှ မရှိလေ ကောင်းလေပါပဲ။
” ချစ်စကို ရှည်စေ မုန်းစကို တိုစေ။ ရန်ကိုရန်ချင်း မတုံ့ပြန်ပါနှင့် သူငယ်ချင်းတို့ရေ...........။
READ - ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့လောကဓံ
Read 612 times Last modified on Thursday, 14 March 2019 11:17
ကြိုးစားပေမဲ့ ရလဒ်တွေ ဘာလို့ ကောင်းမလာတာလဲ?
အသုံးကျဖို့ထက် အသုံးချတတ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်!